Ngibuyekeze! Ukubhloga AmaDola | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Okuthunyelwe Okuxhasiwe: Buyekeza
Lapho i-PayPerPost ne-ReviewMe ziqala ukuvela, ngangidumele kakhulu. Ngizizwe sengathi 'ukubhloga amadola' kuzothatha ithuba kube kubi kakhulu. Namuhla kusihlwa ngiqaphele okuthunyelwe okumbalwa kwamanye ama-blogs ukuthi i-ReviewMe empeleni ibisebenzisa uhlelo lwayo ukukhokhela ama-blogger ukuze zizihlole. Kungidonsele ukunaka ngakho ngabhalisela ukulihlola.
Kungumqondo othakazelisayo. Ngokuya ngokuvezwa kwebhulogi yakho (i-Alexa, i-Technorati, i-RSS, njll.), Ibhulogi yakho inikezwa inani ledola ozolikhokhelwa lapho uqeda ukubuyekeza. Ngamanye amagama, unxeshezelwa ngokususelwa kwinani labantu abafunda ibhulogi yakho. Akuwona umqondo omubi. Ngicabanga ukuthi le kungaba yindlela enhle impela yabakhangisi. Okuningi kulokho…
I-ReviewMe ayidingi ukuthi ubhale ukubuyekeza okuhle! Ngamanye amagama, ungathembeka ngokuphelele. Ngicabanga ukuthi lokho kuzoheha abakhangisi ngemikhiqizo emihle, kepha i-ReviewMe izobasusa abakhangisi abangathembekile. Sawubona! Lokho kuhle kithi sobabili, akunjalo? Into yokugcina engifuna ukuyenza ukuphatha abantu abafunda ibhulogi yami ukuzama ukwenza izinzuzo ezimbalwa. Lokho kungabeka abafundi bami engcupheni futhi yilokho engikubeke ngesikhathi esiningi ngizama ukwakha. Anginalo igama elikhulu noma ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane, ngakho-ke anginaso isikhathi esincane. Abantu bathambekele ekuthambekeleni kubafana abakhulu.
Okunye engikuthandayo ukuthi bona ufuna ukuthi ucace ukuthi okuthunyelwe kubhulogi onxephezelwa ngakho:
Kufanele uveze ukuthi okuthunyelwe okuthunyelwe okukhokhelwayo ngandlela thile. Nayi eminye imibono: “I-Sponsored Post:”, “Okulandelayo ukubuyekeza okukhokhelwayo:” “Isikhangiso:”.
Ngakho-ke ngokombono webhizinisi, ngiyayihlonipha insizakalo ye-ReviewMe futhi ngibafisela okuhle! Kunezikhathi lapho nginenkinga impela ukuzama ukucabanga ngeposi engizolibeka, kepha ngibhajwe phakathi kwedwala nendawo enzima. Uma ngingathumeli nsuku zonke, ngibona ngokuphelele ukuthambekela kuthrafikhi eyehlayo. Uma ngithumela nsuku zonke, ngibona ukujikijela phezulu kuthrafikhi. Okuqukethwe INKOSI ngebhulogi yami. Engingafuni ukukwenza ukuchitha isikhathi sakho lapha, noma kunjalo. Ngakho-ke, ngikhohliwe okuthunyelwe ngezinsuku ezithile lapho bengingenalutho olwakhayo engingangeza engxoxweni yethu.
Ngizozama i-ReviewMe isikhashana… hhayi njengomthombo wemali engenayo, kepha ngizobona ukuthi ingagcwalisa yini lezo 'zikhala' lapho kufanele ngibhale khona ngokuthile kodwa ngingenakho okwanele ukuqhubeka. Ngizothembeka nani bantu, futhi, futhi nginazise ukuthi kwenzekani. Angifuni ukubeka ubudlelwano bethu engcupheni!
Ngokuqondene nensizakalo, iqonde ngqo phambili. Kumele ngithi isayithi liyadida njengesihogo, noma kunjalo! Kunesigaba somkhangisi nesigaba se-blogger. Kulula kakhulu ukuthola ukuthi ukuluphi uhlangothi lomugqa okulo, kepha isiza asimisiwe ngaleyo ndlela. Kukhona imenyu evundlile, imenyu yangakwesokunxele, bese izinketho ngaphakathi kwendawo yokuqukethwe, imenyu kanyaweni…. Ngisakhumbula ngibona isikhundla sami lapho endaweni ethile kepha angikwazi ukuthola ukuthi ngingabuyela kanjani lapho !!
Ngakho-ke ... umkhiqizo omuhle, ukusetshenziswa kwe-lousy. Iseluleko sami kungaba ngesokuthi abantu bakwaReviewMe babeke ibalazwe kuzo zonke izinqubo zebhizinisi abakhangisi noma ama-blogger abangazithatha ngesayithi… ukubhaliswa, ukungeza ibhulogi, ukwengeza ukubuyekeza, ukusetha izinkokhelo, njll. Bese baklama i-interface ezungeze lokho izinqubo zobukhosi kanye nezinqubo zebhizinisi. Ngicabanga ukuthi ngenza umehluko omkhulu phakathi kwamakhasi nezinqubo ze-blogger. Ukuba nezinkinobho ngaphezulu komunye nomunye kuyamangaza kancane futhi akuyona enembile.
Kulungile! Lesi yisibuyekezo sami sokuqala ku-ReviewMe… se-ReviewMe! Ngiyethemba uyakwazisa ukungafihli kwami.
Kungani abasebenzi abakhulu behamba? Kungani izinkampani ezinkulu kufanele ziqashe?
Dec 1, 2006 ngo-1: 53 PM
Ukulandelela: Ngithole inkokhelo nge-Paypal ngalokhu kufakwa namuhla.